IDM 6.11 built5~ မိုးညိုသား
IDM 6.11 built 5
3:49 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ) No comments
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက် internet download manager 6.11 built5ပါ. လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ကြပါ. အသုံးပြုနည်းကတော့ video file နဲ့ရှင်းပြထားပြီးသားမို့လို့ နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. အထဲမှာ patch ရော keygen ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. အဆင်ပြေပါစေဗျာ.
Mediafire | Minus | ifile.it